गैरआवासीय नेपाली संघ : नेपालमा १० अर्ब भित्र्याउन बनायो समिति – Khabar Silo
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले देशमा १० अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन अध्यक्ष कुमार पन्तको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ।
संघको आइतबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने अभियान अगाडि बढाउन पन्तको संयोजकत्वमा बनाइएको उक्त समितिले एक महिनाभित्र कार्ययोजना पेश गर्ने भएको छ।
संघको बैठकबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाहरुलाई सहयोग गर्न स्थापित श्रमिक कल्याणकारी कोषका लागि एक १ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवध्दता जनाइएको छ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको प्रस्तावमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुले उक्त रकम दिने घोषणा गरेका हुन्। यस कोषबाट विदेशमा रोजगारीका क्रममा पीडितहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमासहयोग गर्दै आएको छ ।
बैठकले १९ वटा एजेन्डामाथि छलफल गरेको थियो । बैठकले यसअघि नै थालिएका कार्यक्रम र पहललाई निरन्तरता दिँदै विभिन्‍न निर्णय गरेको छ। बैठकले सरकारले अघि सारेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा सहकार्य गर्न निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
बैठकले महासचिव डा. हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। विशेष महाधिवेशनले संघको संस्थागत संरचना र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन गर्नेछ। संघको काठमाडौ स्थित सचिवालयलाई चुस्त बनाउन डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।
संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। आगामी २ वर्षका लागि मार्गचित्र कोर्न निकट भविष्यमा संघले एक कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ।
बैठकले ५ उपाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा ५ विभाग (वैदेशिक रोजगार, परोपकारी तथा मावकल्याण, व्यवपार तथा लगानी, सिप, ज्ञान, र नबप्रवर्तन, नेपाल प्रवर्धन) निर्माण गर्ने र बिभागमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरु र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको रहने ब्यवस्था गरेको छ।
एनआरएनए फाउण्डेसन स्थापना गरी सबै परोपकारी कार्यक्रम यसै फाउण्डेसनमार्फत् एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । एनआरएन विज्ञ सम्मेलनलाई निरन्तरता दिँदै दोश्रो विज्ञ सम्मेलन सन २०२० गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै संघको अगामी क्षेत्रीय सम्मेलन मध्यपूर्वमा आयोजना गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको बताइएको छ।